ဖဖေျောဝါရီ ၆, ၂၀၁၉ - ၇:၅၈ ညနေ News Code : 927987 Source : ABNA Link:
قال رسول اللّه إذا کانَ یَوْمُ القیامَةِ نادی مُنادٍ یا أَهْلَ الجَمْعِ غُضُّوا أَبْصارَکُمْ حَتی تَمُرَّ فاطِمَة
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ကေယာမသ်နေ့တွင် အသံပေးသူမှ အသံ ပေးလိမ့်မည်။ အိုကေယာမသ် ရှိ ပုဂ္ဂိုလ် အပေါင်းတို့ အသင်တို့၏ မျက်လုံးများကို ပိတ်ထားပါလေ။ အကြောင်းမှာ ဤနေရာမှ ဖွာသွေမာ (စ.အ) သခင်မ ဖြတ်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ (1)
قال رسول اللّه کُنْتُ إذا اشْتَقْتُ إِلی رائِحَةِ الجنَّةِ شَمَمْتُ رَقَبَةَ فاطِمَة.
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ဂျန္နသ် ၏ရနံ့ ကို ရျှုရှိုက်ရန် စိတ်အား ထက်သန် ချိန်တွင် ဖွာသွေမာ (စ.အ) ၏ ရနံ့ ကို ရျှုရှိုက် ပါသည်။ (2)
قال رسول اللّه حَسْبُک مِنْ نساءِ العالَمیَن أَرْبَع: مَرْیمَ وَآسیَة وَخَدیجَة وَفاطِمَة.
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ ရှိသမျှ စကြာဝဠာအပေါင်းတွင် အကောင်း တကာ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး မှာ ၄ ဦး သာလျှင် ရှိပါသည်။ မဲရ်ယမ် သခင်မ ၊ အာစီယာ သခင်မ ၊ ခဒီဂျာ သခင်မ နှင့် ဖွာသွေမာ (စ.အ) သခင်မတို့ ဖြစ်ပါသည်။ (3)
قال رسول اللّه یا عَلِی هذا جبریلُ یُخْبِرنِی أَنَّ اللّهَ زَوَّجَک فاطِمَة.
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ အိုအလီ (အ.စ) အခုလေးပင် ဂျီဗရာအီးလ် (အ.စ) သတင်းပေးပါသည်။ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်သည် ဖွာသွေမာ အား အသင်နှင့် လက်ထပ်ပေးလိုက်ပါသည်။ (4)
قال رسول اللّه ما رَضِیْتُ حَتّی رَضِیَتْ فاطِمَة.
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ဖွာသွေမာ (စ.အ) ကျေနပ်သူ မည်သူမဆို ကို သာ လျှင် ကျေနပ် တော်မူလေ၏။ (5)
قال رسول اللّه یا عَلِیّ إِنَّ اللّهَ أَمَرَنِی أَنْ أُزَوِّجَکَ فاطِمَة.
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ အိုအလီ (အ.စ) ကျွန်ုပ်အား အလ္လာဟ်ဟို အရှင် မြတ် သခင် အမိန့်ပေးတော်မူ ၏။ ဖွာသွေမာ (စ.အ) အား အသင် နှင့် ထိမ်းမြား ပေးပါလေ။ (6)
قال رسول اللّه إِنّ اللّهَ زَوَّجَ عَلیّاً مِنْ فاطِمَة.
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင်သည် အလီ (အ.စ) အား ဖွာသွေမာ (စ.အ) နှင့် ထိမ်းမြား စေတော်မူသည်။ (7)
قال رسول اللّه أَحَبُّ أَهْلِی إِلیَّ فاطِمَة.
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ကျွန်ုပ် အဲဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) တွင် ကျွန်ုပ်အနီးအနားတွင် အလွန်တရာ အချစ်ဆုံးသူမှာ ဖွာသွေမာ (စ.အ) ဖြစ်ပါသည်။ (8)
قال رسول اللّه خَیْرُ نِساءِ العالَمین أَرْبَع: مَرْیَم وَآسیة وَخَدِیجَة وَفاطِمَة.
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ စကြာဝဠာ ရှိ အမျိုးသမီးအပေါင်းတို့၏ ဦးသျှောင် ဦးဆောင် မှာ အမျိုးသမီး ၄ ဦး ဖြစ်ပါသည်။ (၎င်းတို့မှာ ) မဲရ်ယမ် သခင်မ ၊ အာစီယာ သခင်မ ၊ ခဒီဂျာ သခင်မ နှင့် ဖွာသွေမာ (စ.အ) သခင်မတို့ ဖြစ်ပါသည်။ (9)
قال رسول اللّه سیّدَةُ نِساءِ أَهْلِ الجَنَّةِ فاطِمَة.
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ ဂျန္နသ် တွင် ဝင်ရောက် ရမည့် အမျိုးသမီး အားလုံး၏ ခေါင်းဆောင်မှာ ဖွာသွေမာ (စ.အ) ဖြစ်ပါသည်။ (10)
قال رسول اللّه أَوَّلُ مَنْ یَدْخُلُ الجَنَّةَ: عَلیٌّ وَفاطِمَة.
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ ဂျန္နသ် သုခဘုံ အတွင်းသို့ ပထမဆုံး အလီ (အ.စ) နှင့် ဖွာသွေမာ (စ.အ) ဝင်ရောက်မည့်သူများ ဖြစ်ပါသည်။ (11)
قال رسول اللّه أُنْزِلَتْ آیَةُ التطْهِیرِ فِیْ خَمْسَةٍ فِیَّ، وَفِیْ عَلیٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَیْنٍ وَفاطِمَة.
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ အာယသ် သက်သွဟီး သည် ပန်ဂျသန် ၅ပါး ကျွန်ုပ် ၊အလီ (အ.စ) ၊ ဟစန် (အ.စ) ၊ဟိုစိန် (အ.စ) နှင့် ဖွာသွေမာ (စ.အ) တို့ ၏ ကြီး ကျယ်မြင့်မြတ် အတွက် ကျရောက် လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (12 )
قال رسول اللّه أَفْضَلُ نِساءِ أَهْل الجَنَّةِ: مَرْیَمُ وَآسیةُ وَخَدیجَةُ وَفاطِمَة.
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ ဂျန္နသ်သီ အမျိုးသမီးများ တွင် အလွန်တရာ အမြင့်မြတ်ဆုံး အမျိုးသမီးများ မှာ မဲရ်ယမ် သခင်မ ၊ အာစီယာ သခင်မ ၊ ခဒီဂျာ သခင်မ နှင့် ဖွာသွေမာ (စ.အ) သခင်မတို့ ဖြစ်ပါသည်။ (13)
قال رسول اللّه أَوَّلُ مَنْ دَخَلَ الجَنَّةَ فاطِمَة.
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ ပထမဆုံး ဂျန္နသ် တွင် ဝင်ရောက်မည့်သူမှာ ဖွာသွေမာ (စ.အ) ဖြစ်ပါသည်။ (14 )
قال رسول اللّه المَهْدِیِ مِنْ عِتْرَتی مِنْ وُلدِ فاطِمَة.
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။ အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (အ.စ) သည် ကျွန်ုပ်၏ အဲဟ်လေ့ဘိုက်သ် (အ.စ) မှဖြစ်ပြီး ဖွာသွေမာ (စ.အ) ၏ အမျိုး အနွယ် မှ ဖြစ်လေ၏။ (15)
(1)کنزالعمّال، ج13، ص:91 و 93.منتخب کنزالعمّال بهامش المسند، ج5، ص:96.الصواعق المحرقة، ص:190. أسدالغابة، ج5، ص:523.تذکرةالخواص، ص279.ذخائرالعقبی، ص:48.مناقب الإمام علی لابن المغازلی، ص:356.نورالأبصار، ص:51 و 52. ینابیع المودّة، ج2، باب56، ص:136.
(2)منتخب کنزالعمّال، ج5، ص:97. نورالأبصار، ص:51.مناقب الإمام علی لابن المغازلی، ص:360.
(3) مستدرک الصحیحین، ج3، باب مناقب فاطِمَة، ص:171.سیرأعلام النبلاء، ج2، ص:126. البدایةوالنهایة، ج2، ص:59.مناقب الإمام علی لابن المغازلی، ص:363.
(4) مناقب الإمام علی من الریاض النضرة، ص:141.
(5) مناقب الإمام علی لابن المغازلی، ص:342.
(6) الصواعق المحرقة، باب11، ص:142. ذخائرالعقبی، ص30 و 31.تذکرةالخواص، ص:276.مناقب الإمام علی من الریاض النضرة، ص:141. نورالأبصار، ص:53.
(7) الصواعق المحرقة، ص:173.
(8) الجامع الصغیر، ج1، ح203، ص:37.الصواعق المحرقة، ص:191. ینابیع المودّة، ج2، باب59، ص:479.کنزالعمّال، ج13، ص:93.
(9) الجامع الصغیر، ج1، ح4112، ص:469. الإصابةفی تمییزالصحابة، ج4، ص:378.البدایةوالنهایة، ج2، ص:60.ذخائرالعقبی، ص:44.
(10) کنزالعمّال، ج13، ص:94.
(11) نور الأبصار، ص:52/ شبیه به آن در کنزالعمّال، ج13، ص:95.
(12) إسعاف الراغبین، ص:116. صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة.
(13) سیرأعلام النبلاء، ج2، ص:126. ذخائرالعقبی، ص:44.
(14) ینابیع المودّة، ج2، ص:322 باب56.
(15) الصواعق المحرقة، ص:237